‘प्रेमगञ्ज’ को छायाँकन सुरु – bampijhyala.com
Home > समाचार > चलचित्र > ‘प्रेमगञ्ज’ को छायाँकन सुरु
७ बैशाख २०७८, मंगलवार १६:५३ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । अभिनेत्री बेनिशा हमालको मुख्य भूमिका रहने फिल्म ‘प्रेमगन्ज’को छायाँकन सुरु भएको छ । फिल्मको छायाँंकन सोमबार काभ्रेबाट सुरु भएको हो । परिच्छेद सेनले निर्देशन रहने फिल्ममा बेनिशाको अलवा तेज गिरी, सुप्रिया खनाल, राइडर प्रशान्त, सिमरन खड्का, आयुषी ढकाललगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका रहनेछ ।
चलचित्र चौतारीको ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको फिल्मको छायाँकन काभ्रेसँगै काठमाडौंमा पनि हुने निर्माण युनिटले जनाएको छ । सञ्जय लामाको छायाँंकन, राजु फुयाल निर्माता रहेको फिल्मको कार्यकारी निर्माता अनन्तमान श्रेष्ठ हुन् ।
‘उषाको किरण’मा चन्दन र प्रतिभा
माओवादी अलमलमा, भोलि पनि बैठक डाकियो
तामाकोशी गाउँपालीकामा कोरोना संक्रमण तिब्र, आज बेलुका ५ बजे देखि ८ गते बेलुका ५ बजेसम्म शहरे शिल ७ बैशाख २०७८, मंगलवार १६:५३
सम्झनामा जेठ ३ ७ बैशाख २०७८, मंगलवार १६:५३
शरीरमा अक्सिजनको कमी हुँदा किन घोप्टो परेर सत्नुपर्छ ? ७ बैशाख २०७८, मंगलवार १६:५३
माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउने ? प्रचण्डले मागे सुझाव ७ बैशाख २०७८, मंगलवार १६:५३
बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक ७ बैशाख २०७८, मंगलवार १६:५३